ဒီနှစ်မှာကျရောက်တဲ့ မွေးနေ့ဟာ သူ့အတွက်တော့ ငရဲကျတဲ့ အခြေအနေဖြစ်ကြောင်း ဝမ်းနည်းစွာပြောပြလာတဲ့ နေမင်း…. – Cele Oscar
ဒီနှစ်မှာကျရောက်တဲ့ မွေးနေ့ဟာ သူ့အတွက်တော့ ငရဲကျတဲ့ အခြေအနေဖြစ်ကြောင်း ဝမ်းနည်းစွာပြောပြလာတဲ့ နေမင်း….
August 6, 2021 By L YC News
ပရိသတျကွီးရေ သရုပျဆောငျ နမေငျးဟာ မကွာသေးခငျ ရကျပိုငျးလောကျ က သူ့ရဲ့ ဖခငျ ကှယျလှနျသှားတဲ့ အတှကျ ဝမျးနညျးခံစားနရေတာ ဖွဈပါတယျ။ နမေငျးဟာ မိဘနှဈပါးလုံးကို ဂရုစိုကျနတေဲ့ကွားက ဖခငျဖွဈသူ ဆုံးပါးသှားတဲ့အတှကျ ပွောမ ပွတတျအောငျ နာကငျြခံစားနရေမှာ အသခြောပါပဲ။ ကံကွမ်မာရဲ့ အလှညျ့အပွောငျးတှကေို ကွုံတှနေ့ရေတဲ့ အတှကျ ဒီနမှေ့ာ ကရြောကျတဲ့ သူ့ရဲ့ မှေးနမှေ့ာ တောငျ မပြျောရှငျနရေကွောငျး ဖှငျ့ဟထားပါတယျ။
သူ့ရဲ့ မှေးနတေို့ငျး မိသားစု နဲ့ အတူရှိနခေဲ့ပွီး ဒီနှဈမှာတော့ ဖခငျဖွဈသူ လော​ကကွီးကနေ အပွီးအပိုငျ ထှကျခှာသှားတဲ့ အတှကျ လောကငရဲကို အပွညျ့အဝ ခံစားနရေတဲ့ မှေးနဖွေ့ဈခဲ့ရပွီ ဖွဈကွောငျးကို မကွာသေးခငျ နာရီပိုငျးလောကျက နမေငျး ရဲ့ လူမှုကှနျယကျတှငျ ရေးသားထားပါတယျ။ ပရိသတျမြားနဲ့ အနုပညာရှငျမြားကလညျး စိတျဓာတျမကဖြို့ အားပေးစကား ပွောကွားရငျး နမေငျး အတှကျ မှေးနဆေု့တောငျးလေးတှေ ကိုပါ ရေးသားထားကွတာ ကိုလညျး comment တှငျ မွငျတှေ့ ရပါတယျ။
အခုခြိနျကာလဟာ လူကွီးမိဘတှေ နားမကနျြးဖွဈရအောငျ သားသမီးမြားမှ သခြောဂရုတစိုကျရှိနရေမယျ့ကာလဖွဈပါတယျ။ သရုပျဆောငျ နမေငျးတဈယောကျလညျး ကနျြးမာရေးဂရုစိုကျပွီး ခံစားနရေတာတှေ အားလုံး အမွနျဆုံး ပွနျလညျအဆငျပွပေါပွီး နောငျနှဈမှေးနတှေ့မှောလညျး မိသားစုဝငျမြားနဲ့အတူ ပြျောရှငျစှာ ဖွတျသနျးနိုငျပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးရငျး ဒီသတငျးကို တငျဆကျ ပေးလိုကျရပါတယျ။
ပရိသတ်ကြီးရေ သရုပ်ဆောင် နေမင်းဟာ မကြာသေးခင် ရက်ပိုင်းလောက် က သူ့ရဲ့ ဖခင် ကွယ်လွန်သွားတဲ့ အတွက် ဝမ်းနည်းခံစားနေရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ နေမင်းဟာ မိဘနှစ်ပါးလုံးကို ဂရုစိုက်နေတဲ့ကြားက ဖခင်ဖြစ်သူ ဆုံးပါးသွားတဲ့အတွက် ပြောမ ပြတတ်အောင် နာကျင်ခံစားနေရမှာ အသေချာပါပဲ။ ကံကြမ္မာရဲ့ အလှ
ည့်အပြောင်းတွေကို ကြုံတွေ့နေရတဲ့ အတွက် ဒီနေ့မှာ ကျရောက်တဲ့ သူ့ရဲ့ မွေးနေ့မှာ တောင် မပျော်ရွှင်နေရကြောင်း ဖွင့်ဟထားပါတယ်။
သူ့ရဲ့ မွေးနေ့တိုင်း မိသားစု နဲ့ အတူရှိနေခဲ့ပြီး ဒီနှစ်မှာတော့ ဖခင်ဖြစ်သူ လော​ကကြီးကနေ အပြီးအပိုင် ထွက်ခွာသွားတဲ့ အတွက် လောကငရဲကို အပြည့်အဝ ခံစားနေရတဲ့ မွေးနေ့ဖြစ်ခဲ့ရပြီ ဖြစ်ကြောင်းကို မကြာသေးခင် နာရီပိုင်းလောက်က နေမင်း ရဲ့ လူမှုကွန်ယက်တွင် ရေးသားထားပါတယ်။ ပရိသတ်များနဲ့ အနုပညာရှင်များကလည်း စိတ်ဓာတ်မကျဖို့ အားပေးစကား ပြောကြားရင်း နေမင်း အတွက် မွေးနေ့ဆုတောင်းလေးတွေ ကိုပါ ရေးသားထားကြတာ ကိုလည်း comment တွင် မြင်တွေ့ ရပါတယ်။
အခုချိန်ကာလဟာ လူကြီးမိဘတွေ နားမကျန်းဖြစ်ရအောင် သားသမီးများမှ သေချာဂရုတစိုက်ရှိနေရမယ့်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ သရုပ်ဆောင် နေမင်းတစ်ယောက်လည်း ကျန်းမာရေးဂရုစိုက်ပြီး ခံစားနေရတာတွေ အားလုံး အမြန်ဆုံး ပြန်လည်အဆင်ပြေပါပြီး နောင်နှစ်မွေးနေ့တွေမှာလည်း မိသားစုဝင်များနဲ့အတူ ပျော်ရွှင်စွာ ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးရင်း ဒီသတင်းကို တင်ဆက် ပေးလိုက်ရပါတယ်။
လူနာတွေရဲ့ အိမ်အထိအောက်စီဂျင်စက်များကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျမမောမပန်းနိုင် ကူညီပေးနေတဲ့ စိန်ဖြိုးလှိုင်ရဲ့ ဗီဒီယို…..
ကိုဗစ် ဆိုတဲ့ရောဂါဆိုးကြီးကို အနိုင်တိုက်ထုတ်နေတဲ့ အန်တီ ဒေါ်နွဲ့နွဲ့စန်းရဲ့ လက်ရှိကျန်းမာရေးအခြေအနေ……